‘चेपाङहरुकै उत्थान र उन्नतिका लागि सकेजति गर्छु’ ः – Chitwan Post Daily | चितवन पोष्ट दैनिक
‘चेपाङहरुकै उत्थान र उन्नतिका लागि सकेजति गर्छु’ ः
२०७१ चैत्र १६, सोमबार ०२:३३ गते
चितवनको अधिकांश पहाडी गाविसका चेपाङहरुलाई समस्या प¥यो भने केपीकिरण शर्माको मोबाइलमा घन्टी बजिहाल्छ । उनले फोन रिसिभ गर्छन् र भन्छन्– नआत्तिनुहोस्, म समस्याको समाधान गर्छु । चेपाङको समस्या सुनेपछि उनलाई छटपटी सुरू हुन्छ । फोनबाट गर्न सकिने समस्या भए तुरून्तै गरिहाल्छन्, नत्र झोला बोकेर पहाड उक्लिहाल्छन् र समस्या समाधान गरेर फर्किन्छन् । यसरी नै चेपाङको समस्या बुझ्ने र सकेसम्म समाधान गर्न सक्ने भएका कारण उनी चेपाङमाझ लोकप्रिय भएका छन् ।
झन्डै सात वर्षसम्म विकट पहाडी गाविसहरुमा उकाली–ओराली गरेका उनले चेपाङको समस्या राम्ररी बुझेका छन् । अशिक्षा र गरिबीका कारण चेपाङहरु पछाडि परेको उनको बुझाइ छ । त्यसैले, चेपाङलाई शिक्षा र गरिबी न्यूनीकरणका लागि अभियान चलाएका छन् । उनले चेपाङको जीविकोपार्जनका लागि आयआर्जन र शिक्षाका लागि आश्रम बनाएर चेपाङ बालबालिकालाई आवासीय सुविधासहित अध्ययन गराइरहेका छन् । आर्थिक हिसाबले सामान्य परिवारका शर्माले सहयोग जुटाएर चेपाङ बालबालिकालाई पढाएका हुन् भने सिद्धी गाविसमा आयआर्जनको काममा सक्रिय छन् । उनले अहिले रत्ननगर–१० मंगलपुरमा गामबेँसीको चेपाङ संरक्षण केन्द्र स्थापना गरी ८० जना चेपाङ बालबालिकालाई अध्ययन गराइरहेका छन् । वैदेशिक रोजगारीको शिलशिलामा सात वर्ष यूएईको दुबईमा काम गरेका शर्मा विदेशमा हँुदा पनि साहित्य, पत्रकारिता र सामाजिक काममा सक्रिय रहे । २०६५ सालमा साउनमा स्वदेश फर्किएका शर्माले पत्रकारितामार्फत सीमान्तकृत जाति चेपाङहरुको कथा–व्यथा उजिल्याउनका साथै भौगोलिक विकटता र खाद्यान्न अभावका कारण शिक्षाबाट वञ्चित रहेका चेपाङ बालबालिकाहरुलाई शिक्षाको मूलधारमा ल्याउने प्रयासको थालनी गरे । सहयोग जुटाएर चेपाङ बालबालिकाहरुलाई शिक्षा तथा चेपाङको विकास र उत्थानको काम गरेर सामाजिक उत्तरदायित्व वहन गरिरहेका शर्मासँग गरिएको कुराकानी ः
१) तपाईले चेपाडहरुको उत्थानका लागि चलाएको अभियान कस्तो हो ?
–चितवनलाई सुगम कोटीको जिल्लामा राखिएको छ । तर, जिल्लाकै विकट गाउँका चेपाङहरुको अवस्था अवलोकन गर्ने हो भने सुगम कोटीलाई त्यसले चुनौती दिइरहेको छ । मैले विदेशबाट फर्केलगत्तै ‘गामबेँसीको खबर’ नामक पत्रिका प्रकाशन गरी चेपाङहरुको कथा–व्यथालाई विकटबाट सहरमा ल्याउने काम सुरू गरेँ । त्यस दौरानमा मैले चेपाङ गाउँमा भोकमरी र अनिकालको जुन दृश्य देखेँ, त्यसले मलाई रूवायो । त्यसपछि मैले प्रण गरेँ, सबै काम छाडेर अब म चेपाङहरुको उत्थान र उन्नतिका लागि सकेजति गर्ने छु । अहिले मैले सुरू गरेको अभियान चेपाङलाई शिक्षा र उनीहरुको उत्थानकै लागि हो ।
२) तपाईको अभियानबाट कति जना चेपाङ बालबालिकाले शिक्षा पाइरहेका छन् ?
– २०६८ सालबाट चेपाङ बालबालिकाहरुलाई विभिन्न ठाउँमा आश्रम बनाई पढाउन सुरू गरेको हुँ । हालसम्म २६२ जना चेपाङ बालबालिकाहरुले शिक्षा लिइरहेका छन् । पहिलोपटक मैले २५ जना बालबालिकालाई पहाडी गाविसबाट झारेर विन्देश्वरी निमाविमा राखेर पढाउन सुरू गरेको हुँ ।
३) चेपाङ संरक्षण केन्द्र सञ्चालन गर्ने सोच कहाँबाट आयो ?
–चितवनका विकट पहाडी गाविसहरु सिद्धी, काउले, कोराक, लोथर, चन्डीभञ्ज्याङ, दाहाखानी, कविलासलगायतका गाविसहरु घुम्दा अनगिन्ती चेपाङ बालबालिकाहरु शिक्षाबाट वञ्चित भएको पाएँ । विद्यालय जाने उमेरका बालबालिकाहरु बिहान–बेलुकाको गर्जो टार्न कन्दमूल संकलन गर्दै जंगलमा भौँतारिरहेको दृश्य देखेँ । त्यही दृश्यले मलाई ऊर्जा, प्रेरणा र चुनौती एकैचोटि थपिदियो । २५ जना चेपाङ बालबालिकाको भारी बोकिसकेको मैले थप बालबालिकाको अवस्था पनि उस्तै देखेपछि रत्ननगरमा आश्रम नै बनाएर शिक्षा प्रदान गर्ने अठोट लिएँ । त्यही अठोटले अहिले मेरो आश्रममा ८० जना चेपाङ बालबालिकालाई आश्रय दिएर शिक्षा प्रदान गर्न सफल भएको छु । अन्य बालबालिकाहरु मेरै अभियानअन्र्तगत अन्य ठाउँहरुमा रहेर अध्ययन गरिरहेका छन् ।
४) विन्देश्वरी निमाविमा तपाईले सुरूमा राख्नुभएका चेपाङ बालबालिकालाई अहिले कसले व्यवस्थापन गरेको छ ?
– विन्देश्वरीमा राखिएका २५ जना बालबालिकाहरुबाट मेरो अभियान सुरू भएको हो । सुरूवाती दिनमा झन्डै सात महिना मैले बजार–बजार डुल्दै बोरा थापेर चामल संकलन गरी पालेको हुँ । त्यही दुःख विभिन्न सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित र प्रसारित भएपछि काठमाडौँमा रहेको सिप्रदियन सहायता संस्थाले बालबालिकाहरुका लागि आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण खर्च व्यवस्थापन गरिदिने भएपछि मैले विद्यालय व्यवस्थापन समितिलाई जिम्मा लगाएर बाँकी थुप्रै बालबालिकालाई शिक्षा प्रदान गर्ने अभियानमा जुटेको हुँ । ती २५ जना बालबालिकालाई सिप्रदियन सहायता संस्थाले बीए पास गरून्जेलसम्म सहयोग गर्ने र त्यसपछि पनि रोजगारीको व्यवस्था मिलाउने सहमति भएको छ ।
५) चेपाङ बालबालिकालाई पढाउन र खानपानका लागि आर्थिक व्यवस्थापन कसरी गर्नुभएको छ ?
–रत्ननगर–१० स्थित मंगलपुरमा रहेको गामबेँसीको चेपाङ संरक्षण केन्द्रमा ८० जना चेपाङ बालबालिका आश्रित छन् । तीमध्ये एकदेखि ५ कक्षासम्मका बालबालिकाहरु नजिकै रहेको पञ्चतेज ज्योति राप्रावि र बाँकी बालबालिकाहरु पञ्चकन्या उमाविमा अध्ययन गर्दै आएका छन् । आर्थिक व्यवस्थापनको सम्बन्धमा हाम्रो कुनै दिगो आर्थिक श्रोत छैन । मनकारी महानुभावहरुले दिनुभएको चामल, लत्ताकपडा, स्टेसनरी सामग्रीसँगै म आफूले बोरा थापेर संकलन गरेको खाद्यान्नबाट गुजारा चलाइरहेको छु ।
६) संरक्षण केन्द्रको भवन निर्माणका लागि आर्थिक स्रोत कहाँबाट जुट्यो ?
– हामी पहिलो अर्काको घरमा भाडामा बसेका थियौँ । अनेकौँ समस्याका बाबजुद रत्ननगरको मंगलपुरमा रहेको पञ्चतेज ज्योति राप्रावि र पञ्चकन्या सामुदायिक वनको सहकार्यमा वनकै स्वामित्वमा रहेको जग्गामा आश्रमको भवन बनाएका छौँ । भवन बनाउन सुरू गर्दा हामीसँग एक रूपैयाँ पनि थिएन । कि भवन बनाउने कि पढिरहेका बालबालिकालाई पहाडतिरै फर्काउने बाध्यकारी अवस्थाको सृजना भएपछि हामीले बजारबाट उधारोमा निर्माण सामग्री खरिद गरी भवन निर्माणको काम सुरू गरेका हौँ । भवन निर्माणका लागि सभासद् एकनाथ ढकालको पहलमा ८ लाख ७० हजार, जापानमा बस्ने दीपक नेपालको पहलमा २ लाख १० हजार, कतार बस्ने घनश्याम पराजुलीको पहलमा २ लाख १० हजार, अमेरिका बस्ने विकासराज न्यौपानेको पहलमा १ लाख ८५ हजार र साना–ठूला अन्य सहयोग संकलन गरी भवन निर्माण गरिएको हो । कुल लागत २८ लाख ५० हजार रूपैया खर्च भएको छ । अब करिब भवन निर्माणको ऋण २ लाख ५० हजार रहेको हुँदा सहयोगको लागि आग्रह पनि गरेको छु ।
७) तपाईसँग दीर्धकालीन श्रोत छैन, यसरी मागेर कहिलेसम्म चल्छ ?
— यो विशुद्ध सामाजिक अभियान भएका कारण र पवित्र उद्देश्यका साथ सुरू गरिएको हुनाले माग्दा मलाई कुनै हीनताबोध हुँदैन । संसारमा जति पनि मानिसहरुले सामाजिक काम गरेका छन्, सबैले आफ्नो गोजीबाट पैसा निकालेर गरेका होइनन् । पवित्र कामको सुरूवातमात्र गरिदिनुपर्छ, सहयोगी हातहरु निरन्तर अधि बढिहाल्छन् । दीर्घकालीन सोचको जुन कुरा छ, भवन निर्माणको ऋण चुक्ता गरिसकेपछि हामी बृहद् रुपमा अक्षय कोष निर्माणमा लाग्ने छौँ । दुई करोड रूपैयाँको अक्षय कोष बनाउने योजना छ । यो अक्षय कोष निर्माण गर्न सकियो भने म नभए पनि मेरा चेपाङ बालबालिकाहरुले निरन्तर पढ्न पाउने छन् । पढेपछि उनीहरुले आफ्नो समुदायको उन्नति र प्रगति आफैँ गरिहाल्छन् ।
८) सात वर्षसम्म तपाईले चेपाङ उत्थान र शिक्षाको क्षेत्रमा काम गर्दा भएका उपलब्धिहरु के–के छन् ?
– मैले यो अभियान सुरू गर्ने बेला जे सोचेको थिएँ, करिब–करिब म त्यसको नजिक पुग्दै छु । सिटामोल नपाएर ज्यान गुमाएका चेपाङहरुको गाउँमा जब म पुग्थेँ मेरो मनमा लाग्थ्यो, चेपाङ समुदायबाटै स्वास्थ्यकर्मी उत्पादन गर्न सकियो भने चेपाङहरुले अकालमा ज्यान गुमाउन पर्थेन होला । आज सिद्धि गाविसका चन्द्रबहादुर चेपाङ एचए दोश्रो वर्षमा अध्ययन गरिरहेका छन् । अर्की शर्मिला चेपाङ सीएमए अध्ययन सकेर आफ्नै गाउँ काउलेमा स्वास्थ्यकर्मीका रुपमा जाने तयारीमा छिन् । त्यस्तै, काउलेकै विवेक चेपाङ भेटेरिनरी जेटिए अध्ययन सकेर रोजगारमा लागिसकेका छन् भने रेशम चेपाङ भेटेरिनरी जेटिए अध्ययन गरिरहेका छन्, जसलाई गामबेँसीको अभियानले सहयोग गरिरहेको छ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा अध्ययन गरिरहेका यिनीहरुलाई पनि सहयोग जुटाएर अध्ययन गराइएको हो ।
९) तपाईकै पहलमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई सिद्धिको चेपाङ गाउँसम्म पुग्नुभयो । प्रधानमन्त्रीजस्तो मान्छे आएपछि सिद्धिको अवस्थामा कस्तो परिवर्तन आयो ?
– डा. भट्टराई सिद्धिमा आउँदा मलाई सामान्यजस्तै लागेको थियो । मैले सोचेको थिएँ– नेताहरुको काम भाषण गर्ने हो, भाषण गर्छन् जान्छन् । तर, मैले सोचेभन्दा निकै अलग पाएँ उहाँलाई । मैले उहाँसँग लामो कुराकानी गरेँ, चेपाङहरुको समस्या जानकारी गराएँ र समाधान कसरी गर्ने भन्ने बाटो पनि देखाइदिएँ । उहाँ तुरून्तै सहमत हुनुभयो र चेपाङहरुको आयआर्जनका लागि सिद्धिमा गरिबी निवारण कोषमार्फत कार्यक्रम सुरू गर्न निर्देशन दिनुभयो । सिद्धिमा त्यसको नेतृत्व म आफैँले गरेँ । हालसम्म सिद्धि गाविसमा मात्रै ५१ वटा सामुदायिक संस्था दर्ता भएका छन् । चेपाङको आयआर्जनको लागि अहिलेसम्म एक करोड रूपैया लगानी भइसकेको छ । सिद्धिका ३५० घरधुरीले जीविको–पार्जनका लागि आयआर्जनको काम सुरू गरिसकेका छन् ।
१०) संरक्षण केन्द्रमा आश्रय लिइरहेका ८० जना चेपाङ बालबालिकाहरुलाई भविष्यमा के बनाउने योजना छ ?
–एसएलसीसम्म पढाइसकेपछि सीपमूलक काम सिकाउने योजना छ । प्लस २ पढ्दै सीपमूलक तालिम लिँदै गर्छन् । १२ कक्षा सकिएपछि एउटा न एउटा रोजगारीमा लगाउने योजना छ । सकेसम्म आर्थिक आम्दानी हुनेगरी चेपाङकै विकास र उत्थानमा लाग्दै मैले पढाएका बालबालिकालाई सक्रिय बनाउने सोचमा छु ।